DEG-DEG: Kooxaha Premier League Oo Ku Guulaystay In Garoomadooda Ay Ku Ciyaaraan Kulamada Baaqiga Ah - Gool24.Net
DEG-DEG: Kooxaha Premier League Oo Ku Guulaystay In Garoomadooda Ay Ku Ciyaaraan Kulamada Baaqiga Ah
Kooxaha Premier League ayaa soo afjaraya khilaaf toddobaadyo u dhexeeyey oo ku saabsanaa halka ay ka dhacayaan kulamada ka hadhay horyaalka ee marka dib loo bilaabo, kuwaas oo kooxaha waaweyn ay u ololaynayeen in garoomo dhex-dhexaad ah oo tiradooda lagu sheegay siddeed lagu qabto.
Naadiyada Premier League ayaa hadda loo ogolaanayaa inay ka faa’iidaystaan garoomadooda oo ay kulamada u hadhay koox walba ku dheesho hoygeeda, kaddib markii ay ogolaansho ka heleen ciidamada booliska.
Kulan dhex-maray xubno sare oo ka tirsan Premier League, masuuliyiinta dawladda iyo saraakiisha booliska ayaa waxa la iskula qaatay in 92-ka ciyaarood ee ka hadhay xili ciyaareedka koox walba ay kulamadeeda ku ciyaarto garoonkeeda.
Arrintan soo afjaraysa khilaafkii kooxaha dhexdooda ka qarxay ee qaarkood ay doonayeen garoomada dhexdhexaadka ah, kuwo kalena u dagaallamayeen in aan laga kaxaynin hoygooda si ay ugu ciyaaraan ciiddooda iyo halka ay la barteen oo faa’iido u ah laacibiintooda inkasta oo ay taageereo la’aan yihiin.
Maamulka Premier League ayaa Isniintii shaaciyey inay dawladda UK ka dalbadeen inay talo ka siiso arrintan khilaafka abuurtay, waxaana hadda soo laabatay jawaabtii dawladda iyo ciidamada booliska oo kooxaha u ogolaanaya inay garoomadooda ku ciyaaraan.
Wargeyska Mirror ayaa fahamsan in dawladdu ay kooxaha u ogolaatay in kulamada dhiman ay sidii caadiga ahayd marti iyo minan ugu ciyaari karaan.
War-saxaafadeed uu soo saaray ku-xigeenka Komishaneerka booliska South Yorshire, Mark Roberts ayaa waxa uu ku shaaciyay aragtida boolisku ka qabaan arrintan.
“Anniga oo tixraacaya shir togan oo xalay dhex-marahy booliska, dawladda iyo kubadda cagta, waxa aanu si wada-jir ah usoo bandhigaynaa doorashooyin aanu ku helayno jid hore loogu socdo, kaas oo yaraynaya khataraha dadka shacabka oo ilaalinaya badqabkooda, cadaadiska aan loo baahnayna ka qaadaya adeegyada bulshada, laakiin sidoo kale fududaynaya in si macquul ah dib loogu bilaabo xili ciyaareedka, lana taageero dhaqaalaha iyo faa’iidooyinka dhinaca niyadda ee la xidhiidha ciyaaraha.” Ayuu yidhi, Mark Roberts.
Sarkaalkan booliska ayaa hore uga digay caqabadda ka dhalanaysa haddii kulamada hadhay ay kooxuhu ku ciyaaraan garoomadooda, isaga oo xusay inay keeni doonaan xaalado degdeg ah.
Si kastaba, duqa magaalada London, Sadiq Khan ayaa dhowaan walaac ka muujiyey in caasimadda UK ay martigeliso ciyaaraha Premier League, iyadoo uu hoosta ka xariiqay in aanu ogolaan doonin in garoomada magaalada loo isticmaalo kuwo dhex-dhexaad ah oo naadiyo badan ay martigeliyaan.